Chii chinonzi chikoro chesekondari kudzidza? | Kuumbwa uye kudzidza
Chii chinonzi chikoro chesekondari kudzidza?
Maite Nicuesa | | Scholarship
Kwete chete zvinokwanisika kunyorera yehunyanzvi kuti utange zvidzidzo zveyunivhesiti, asi kune mamwe marudzi ezvirongwa zvine chinangwa chekusimudzira kudzidza kune mamwe madanho ekudzidzira. Chikamu chesekondari chakakosha kwazvo kune avo vadzidzi vari kutanga kuona kwavo ramangwana rehunyanzvi. Kune akasiyana marudzi ezvikoro zvepamusoro chikoro zvinopa zvakakosha zviitiko.
Kunyorera fomu yehunyanzvi, zvakakosha kuti unyatso verenga ruzivo rwekufona kuitira kuti uone kana mumiriri achizadzisa zvinodiwa kuti ararame chiitiko ichi. Ichapa zvinyorwa zvakakodzera mukati menguva yenguva yakaratidzirwa kumirira kugadziriswa kwekupedzisira kwesangano rinoungana. Semuenzaniso, kudzidza kunze kwenyika kwechinguva, uchiita kunyudzwa kwemitauro. Nekuda kwehunhu hwavo, aya mabhezari haangopi chete rutsigiro kumudzidzi, asiwo kumhuri inogamuchira mari yekubhadhara iyo fizi. Vhura Maumbirwo uye zvidzidzo Isu tinonyora mienzaniso mitatu yemapurogiramu echikoro anoitirwa kudzidza kusekondari.
1 Amancio Ortega Foundation Scholarship Chirongwa
2 MEC Scholarship yeSekondari uye Baccalaureate
Amancio Ortega Foundation Scholarship Chirongwa
Iyi Sisekelo ine chirongwa chehunyanzvi chinosimbisa kunyudzwa mumitauro kwevadzidzi vari kudzidza kuchikoro chepamusoro mumasosi nemakoreji. Iyo nguva yeiyi kudzidza ndeye gore rimwe redzidzo. Panguva yekugara kwavo kwavaienda, mudzidzi anogara nemhuri inoenda navo panguva iyi. Iyi yekubatsira yemari inovhara ese masevhisi anoita ruzivo rwekugara uku. Semuenzaniso, kutama, kubhabhatidzwa, kuchengetedza uye inishuwarenzi yehutano.
Chirongwa ichi chinodaidzira mazana matanhatu ezvemabhizimusi izvo vadzidzi ve600 ESO vanonakidzwa pavanotanga Gumi nerimwe ivo vachararama kugara muUnited States kana Canada. Kugara kwechikoro kunoenderana nenguva inofungidzirwa yemwedzi gumi. Kubudikidza newebsite yeprojekti iwe unowana ruzivo rwese kuratidza mafomu akakosha mukati menguva dzakatarwa.
Mudzidzi haazongove nemukana wekuvandudza yavo yeChirungu, asi zvakare achararama chiitiko chinozoratidza kukosha kudzidza padanho rekuziva. Ichave iri nhanho umo, semuenzaniso, protagonist ichave nemukana wekuita shamwari nyowani dzaanogona kubva aramba achichengetedza hukama.
MEC Scholarship yeSekondari uye Baccalaureate
Iyi ndiyo imwe yekufona kwaunogona kuterera kuti upe ruzivo rwunoenderana kana uchida kunyorera rubatsiro urwu, rwakanangana nezvidzidzo zvisiri zveyunivhesiti. Ichi chidzidzo chinoshevedzwa nebazi rezvedzidzo, tsika nemitambo.
Nharaunda yega yega Inodzivirira inosimudzirawo zvakasiyana zvinobatsira pakudzidza. Iyi fundo yatinopa pazasi inoitirwa vadzidzi vechikoro chesekondari vane chinangwa chekusimudzira kuenderera mberi mukudzidziswa kweavo vadzidzi vanopinda asiri-yunivhesiti nzvimbo dzekudzidzisa muAndalusia dzinodzidzisa dzidzo yepamutemo mumunhu.
Iyi kudzidza haisi chete rubatsiro rwevadzidzi vechikoro chesekondari, asi zvakare Yepamusoro Artistic Dzidzo uye Kudzidzisa kwegore rechipiri reMiddle Degree reUnyanzvi Kudzidziswa.
Kudzidziswa kwakakosha muhupenyu hwemunhu uye yega yega yedzidzo kutenderera inopa kurudziro yezvinangwa zvitsva zvakaitwa. Chikamu chesekondari ndiyo iyo iyo mudzidzi anotanga kuona zvingangoita sarudzo dzinozomubatsira kuti basa rake rehunyanzvi riitike mune ramangwana, semuenzaniso.
Kana uchiendesa chikumbiro chehunyanzvi zvinokurudzirwa kuti utarise nezve yako wega chinangwa kuti uise pamberi icho rubatsiro icho chinoitirwa kusimbisa icho chinangwa. Semuenzaniso, kana iwe uchida kurarama nguva yekudzidza kune imwe nyika kuenda, iwo masomo anokurudzirwa neAmancio Ortega Foundation ndiwo muenzaniso wechirongwa chakanangana kusvika kumagumo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » University » Scholarship » Chii chinonzi chikoro chesekondari kudzidza?
Mahara epamhepo makosi: zvakanakira nekuipira
Chii chinonzi koreji kudzidza?